Nzira yekushandura EPUB kuita MOBI fomati paLinux | Linux Vakapindwa muropa
ari mabhuku emagetsi kana ebook Iwo ndiwo marongero ezuva, uye senguva dzose, pane kumwe kusawirirana pakati pevakagadziri vakasiyana kana ivo vanoda zvakasiyana maratidziro ezvigadzirwa zvavo. Ndokusaka iyo nhamba yemafomati ayo ebook inogona kutora yakakura kwazvo. Izvo zvine hutano, nekuti isu tinogona kusarudza yakanakisa sarudzo kune yedu kesi, nekuti yega yega ine zvayakanakira nezvayakaipira, asi chokwadi ndechekuti zvinoita kuti zviome kutsigira ese aripo software nemidziyo.
Mapurogiramu mazhinji kana zvishandiso senge Kindle uye vamwe vaverengi vemabhuku edhijitari vanotsigira chete mafomati mashoma. Muzviitiko izvi, patinotora kana kutora bhuku remagetsi kana comic mune imwe fomati uye isu tichida kuzviburitsa mune imwe nzira, ipapo ndipo panomuka matambudziko. Zvakanaka, ngatitangei titarise mafomati akakosha aripo uye tobva tatsanangura maitiro ekuchinja kubva EPUB kuenda kuMOBI uye zvakare kubva kuPDF kuenda kuMOBI ...
1 Mafomu akatanhamara ebook:
2 Nzira dzekushandura EPUB kuita MOBI:
2.2 Na KindleGen:
3 Nzira dzekushandura PDF kuita MOBI:
Mafomu akatanhamara ebook:
Ziva mafomati akasiyana ebook rinotibatsira kusiyanisa pakati pehunhu hweimwe neumwe uye izvo zvishandiso kana zvirongwa zvinoenderana kana kwete nazvo:
MOBI: Izvo zvinowirirana neAmazon Kindle vaverengi uye zvakare yeAmazon maapplication emafoni nhare senge mafoni netafura. Zvinosuruvarisa kuti hazvigamuchirwe nemamwe majaira ...
ePUB: ndeimwe yemafomati makuru ekuverenga zvinyorwa, iine sevhisi yakakwana uye inoshandiswa nezvitoro zvidiki. Iyo inowirirana zvakanyanya nemidziyo yakawanda uye yakanyanyisa kuita. Kune imwe yemazuva ano misiyano inonzi ePUB3 ine .epub3 yekuwedzera kune mamwe maficha akawedzerwa sekushanduka kweiyo yapfuura. Iyo inotsigira yakatsanangurwa, yakamisikidzwa, yega audiobook functionalities, kuwiriranisa nemavhidhiyo, zvinyorwa, nezvimwe. EPUB3 inotarisira kuve muyero weebook mune ramangwana.
TXT: auqneu iri nyore zvinyorwa faira, rinoshandiswawo mune zvimwe zviitiko zvemabhuku akapusa. Inoenderana nevazhinji vaverengi.
PDF: Iyo ndeimwe yemafomati epasirese, uye kuva ne .pdf fomati inovimbisa kuenderana nechero mudziyo uye software. Zvikuru zvekuti yave muyero.
Mobipoket, KF8 uye Topazi: Ivo vane zviwedzero senge .mobi, .pcr, .azw, .azw3 uye .tpz, iwo akasarudzika mafomu eMhando yeAmazon chishandiso uye tsigiro zvirevo, mabhukumaki uye anotakura DRM.
Fictionbook: iyo faira ine yekuwedzera .fb2 yakavhurika uye yakapararira kwazvo muRussia, kunyange zvisiri zvakajairika pano. Iyo haigamuchire DRM, asi inotsigira semantic mucherechedzo, saka inogona kushandurwa nyore nyore kune mamwe mafomati. Kunge yekutanga, inotsigira mabhukumaki uye zvirevo, ichichinjika zvakanaka kuchiratidziri.
Daisy: .dbt ndiyo chaiyo fomati yemabookobooks. Ivo vakanyanya kunangidzirwa kune vashandisi vane hurema. Iwo odhiyo uye zvinyorwa zvinoenderana, izvo zvinobvumidza kufamba kuburikidza nebhuku (enda kune peji, tsvaga ...)
Comic Bhuku: (.cba, .cbr, .cbz) inowanzo fomati yemazhinji edhijitari, kunyangwe ichishandira chero bhuku rine mifananidzo yakawanda. Kuti uwedzere uremu, ivo vanomanikidzwa. Kuwedzeredzwa kunoenderana nekumanikidza: .cbz yeZIP; .cbr yeRAR uye .cba yeACE, kunyangwe ichitsigira mamwe marudzi ekumanikidza mafomati. Haisi yekudyidzana, haibvumire zvirevo kana haina kukodzera iyo skrini.
Vhura eBook: ndiyo yakatangira iyo ePub uye inogovaniswa pamwe nekuwedzera .opf. Iyo yakajairwa fomati inotsigirwa neNIST.
Muverengi wePalm: mafaera ane .pml yekuwedzera ndiwo chaiwo markup mutauro fomati yakagadzirwa nePalm Reader. Inogona kuvhurwa neReader, asi haina kukodzera kutakurika.
BBeB: ndiyo fomati yechinyakare yevaverengi veSony, ine ekuwedzera .lrf uye .lrx. Vaverengi vatsva vechiratidzo ichi havachazvitsigire uye iyo catalog yemazita inoenda kuPub, saka unofanirwa kuirasa.
Microsoft LIT: Ndiyo fomati inoverengwa naMicrosoft Reader, iine .lit yekuwedzera. Yaive yekutanga e-bhuku mafomati uye yaibudirira kwazvo, asi parizvino haina kutsigirwa. Iyo inotorwa kubva kuCHM fomati, zvakare kubva kuMicrosoft.
iBooks: Ndiyo fomati yemabhuku akagadzirwa neApple Author iBooks. Iyo yakanangana nekuzvishambadza-yega kwebhuku rakapfumiswa, nemikana yakawanda yekudyidzana uye basa rekushandira pamwe. Chete zvemidziyo yeIOS, uye vane .ibook yekuwedzera.
DjVu: haisi nzira yakapararira zvakanyanya kune PDF. Kuwedzeredzwa kwayo ndeye .djvu uye zvakasiyana nePDF, iyo yakavambwa seyakavhurika faira fomati. Mazhinji mabhuku eruzhinji eruzhinji anoongororwa mune iyi fomati. Inotendera zvirevo uye mabhukumaki.
HTML: Iyo ndiyo fomati chaiyo yemapeji ewebhu uye zvese zvishandiso zvine browser rakaisirwa riverenge. Izvo zvinokanganisa ndezvekuti hazvisanganise iyo mifananidzo, mavhidhiyo, nezvimwe, mune imwechete faira, asi zvitende kana kwete, pane ma ebook ane iyo .html yekuwedzera.
Yakanyorwa HTML: iyo .chm fomati ndiyo yakagadzirwa neMicrosoft sezvatakambotaura kare. Yakagadzirwa kuti ipe zvemukati rubatsiro rwemukati. Iyo inoshandiswa kugadzirisa ma ebook nekuti inogona kuumbiridza akati wandei HTML mufaira rimwe chete wozvibatanidza pamwechete.
RTF: .rtf ndiyo yakapfuma zvinyorwa zvemafomati. Microsoft yakaigadzira kuti ikwanise kupa mavara mavara (italics. Fonti mhando, saizi ...). Mazhinji mazwi processor anoverenga nekunyora iyi fomati, uye vangangoita vese vaverengi vanotsigira. Nekuda kwekureruka kwayo, haina akawanda maficha ebhuku remagetsi.
DOC (.doc, .docx): Ndiyo yemhando fomati yeMicrosoft Word. Kugadziridza ma ebook mune iyi fomati kazhinji kunowanzove kushoma kwehunyanzvi, saka hazvikurudzirwe zvakanyanya kana uye haina kutsigirwa nezvirongwa zvese nemidziyo, kure nazvo ...
Zvirokwazvo Caliber inotsigira angangoita ese mafomati, ichiigadzira inoshamisa manejimendi chishandiso.
Uye kana iwe ukashandisa Caliber iwe unogona zvakare chinja KFX ku epub uchishandisa yakapusa plugin. Sezvauri kuona, izere nemikana
Nzira dzekushandura EPUB kuita MOBI:
Rangarira kuti Kindle haitsigire zvakananga EPUB fomati, saka zvinogona kunetsa kuve nemabhuku erudzi urwu kana uine zvishandiso kana iyo Kindle app.
Zvakanaka chinja EPUB kuva MOBI uye kukwanisa kuburitsa iyi fomati pane yedu Amazon Kindle piritsi kana eBook muverengi, tinogona kushandisa Caliber. Nguva imwe kurodha pasi uye kuisa Caliber tinogona kutaura kuti tishande naye. Semuenzaniso, kana iwe ukashanda neDebian kana zvigadzirwa, unogona kuzviita kubva kumahombekombe e distro ne:
Kana kune mamwe maitiro akajairika, unogona kusarudza isai seizvi:
Kana zvikasashanda, iwe unogona zvakare kuyedza izvi imwe nzira kubva kunobva kodhi
Zvakanaka, ngazvive sezvazvinogona, kana iwe uine Caliber yaiswa, tinogona kuzviita kubva ku graphical interface nenzira yakapusa, tichipfuura EPUB kuMOBI, asi isu ticha tsanangura maitirwo azvo kubva koni ne:
Kana iwe usina kugutsikana neiyi sarudzo, unogona kusarudza iyo Amazon Kindle Gene ivo vakagadzira kutendeuka kubva EPUB kuenda kuMOBI. Chinhu chekutanga kuisa icho, kune izvi isu tinotora kubva pane izvi peji peji. Isu tinongofanirwa kuburitsa iyo yakadzingwa faira uye kana dhairekitori raitwa, tinopinda mairi uye tobva taita rairo yekukumbira KindleGen kubva kunyaradzo:
Nguva dzose yeuka kuchinja mazita emafaira kune avo vaunazvo ...
Nzira dzekushandura PDF kuita MOBI:
Pane nzira dzinoverengeka kana dzimwe nzira dzekushandura fomati PDF kuMOBI. Iwe pamwe watove nekunzwa nezve inonakidza Caliber chirongwa chaunogona kushandisa yako eBook raibhurari. Nayo iwe zvakare unokwanisa kushandura pakati pechaunga chemafomati akasiyana, kubva kune akajairwa akadai sePDF, ePUB, kune mamwe madiki anozivikanwa. Iyo graphical interface iri nyore uye isu tinongofanirwa kurodha faira iri muraibhurari yaro tobva tashandura roga kana muboka ... asi zvinosuwisa kuti Caliber haitsigire MOBI.
Iwe zvakare uchave waona izvo zvewebhu zvisarudzo zvatiinazvo. Kune huwandu hwe mapeji ewebhu Iyo yatinoshanda nayo kubva kune chero dandemutande rewebhu kuti tiite online online saizi, pikicha zvekare, kushandura pakati pemafomati akasiyana. Chokwadi ndechekuti pane akawanda uye iwe unogona zvakare kuvawana nebasa rekushandura kubva kuPDF kuenda kuMOBI nekukurumidza nzira. Ichokwadi kuti zvimwe zvinoda kunyoreswa kana kubhadhara, asi kune zvekare zvakawanda zvemahara.
Asi hapana kana chinhu chimwe kana chimwe icho icho isu chatinotsvaga kutsanangura muchinyorwa chino, izvo zvatinoda chishandiso chemuno muLinux distro yedu kuti tikwanise kuita shanduko nenzira yakapfava uye inokurumidza. Kune izvi isu tiri kuzoshandisa iyo package inonzi ebook-inoshandura, chirongwa chidiki icho chinokutendera iwe kuti uchinje pakati pemhando dzakasiyana dzebhuku. Unogona kuiwana zviri nyore mumatura ekugovana aunofarira neyakajairika, uye kana zvisiri, unogona kugara uchizvirodha kubva kunetiweki.
Uye isu tinogona sei kupfuudza iyo faira mune PDF fomati kune imwe MOBI nepakeji iyi? Zvakanaka, kana yaiswa chete, tinoenda kunyaradzo uye tinomhanya iwo unotevera kuraira kubva kudhairekitori iko iko PDF. Zviripachena uchafanirwa kutsiva mazita emafaira neayo iwe aunoda mune yega kesi ...:
Uye saka iyo PDF inotsiviwa neiyo nyowani .mobi faira.
Kana uine mazano kana mibvunzo, usakanganwa kusiya yako inotsanangura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Nzira yekushandura EPUB kuita MOBI fomati pane Linux
Shandisa pandoc :)
Linux inonyanya kufarirwa kupfuura Windows mune yazvino Stack Kufashukira kuongorora